IHodges University Iyabiza! »Buka ukufundiswa kanye nezimali
Amanani nezimali zeHodges University
Uyemukelwa eHodges University! Ukufundiswa nezimali zikaHodges ziyaqhubeka nokuba ngezinye zezinto eziphansi kakhulu ezikhungweni ezizimele esifundazweni saseFlorida. Isifundo singancishiswa ngemifundaze, izibonelelo kanye nezaphulelo zemfundo. Izimalimboleko zikahulumeni kanye nezibonelelo, kanye nosizo lwezezimali oluvela emnyangweni wezemfundo, ziyatholakala.
Masibe Ngempela - Okufanele Ukwazi Ngezindleko Zokufunda Ezifihlekile Ku-Apula Kuqhathaniswa Nama-apula.
Ubuwazi ukuthi kunemithetho ehlukile yokuthi amanyuvesi kahulumeni nawangasese adingeka kanjani ukuthumela izifundo zawo? Amanyuvesi kahulumeni avunyelwe ukuthumela izindleko zizonke, okuvame ukubizwa nge- “In-State Tuition,” kuyilapho izikhungo ezizimele ezingenzi nzuzo kudingeka ukuthi zibhale inani eliphelele lehora lokufunda. Ngokwengeziwe, amanyuvesi omphakathi awahlali ecacile ngemali ekhokhwayo eyengeziwe namashaji angahlolwa kumfundi ngemuva kokubhalisa. KwaHodges, sifuna ukuqinisekisa ukuthi abafundi bakuqonda kahle ukubaluleka kwemfundo abayitholayo.
Isitshudeni siqhathanisa uhlelo lwe-RN kuzo zombili iHodges University nasekolishi lomphakathi. Ekuqhathaniseni ikhanda nekhanda, iHodges ibonakala ibiza kakhulu kuhlelo olufanayo. Lokho umfundi angakwazi ukuthi ikolishi lomphakathi linikela ngeziqu zeminyaka emibili ze-RN ngenkathi uHodges enikeza umqashi okhethwe ngumqashi futhi mhlawumbe odingekayo weSayensi Yezobuhlengikazi. Uhlelo lwethu lubandakanya nemfundo, izincwadi, amalebhu, umfaniswano, ne-stethoscope, ngenkathi ikolishi lomphakathi lingakhokhisa imali eyengeziwe ngalezi zinto. Ngokwengeziwe, ngenkathi zombili lezi zinhlelo zidinga izifundo ezidingekayo, uhlelo lwethu lunikezwa ngejubane elisheshayo, ngesethingi losayizi weklasi elincane, futhi lifundiswe ngezikhathi lapho abantu abadala abasebenza khona bengaya khona.
Isitshudeni esiqhathanisa iHodges University kanye neyunivesithi yomphakathi yeminyaka engu-4 sibona isilinganiso esikhangisiwe, ngokwesilinganiso, esingu- $ 240 ngehora lesikweletu le-undergraduate degree. Uma kuqhathaniswa nesilinganiso esithunyelwe sikaHodges esingu- $ 595, lokhu kuzwakala njengesivumelwano esimnandi, kepha ake simbe kancane sijule. Okokuqala, lelo zinga lisebenza kuphela uma usesifundazweni. Izilinganiso ezimaphakathi zabafundi bakahulumeni abaya eyunivesithi yomphakathi yeminyaka engu-4, ngokwesilinganiso, cishe zingama- $ 800. EHodges University, ukhokha inani elifanayo ngehora lesikweletu kusuka kunoma yikuphi emhlabeni.
Izinga lesisekelo likaHodges ngu- $ 595, kepha ngemodeli yethu eyinhloko kanye nezine uthola amakhredithi ayi-16 ngentengo engu-12. Ngaphezu kwalokho, uma uhlala esifundazweni saseFlorida, ungazitholela wena uqobo isibonelelo se-EASE, cishe esingama- $ 1420 2020-2021. Lokhu kusho ukuthi ungakhokha okuncane njenge- $ 353.75 / ihora lesikweletu. Lapho-ke, uma ungeza kuma-GI Bills, izaphulelo zamasosha nezamabhizinisi, izinhlelo zebhebhoni ephuzi, uxhaso lomthombo womsebenzi, izifundi, iBright Futures, imiklomelo yePell Grant, kanye nezifundo zangaphakathi, abanye abafundi abakhokhi lutho.
Ukungasho, eyunivesithi yomphakathi yeminyaka engu-4, ungaya emakilasini anabafundi abangafika ku-200-350 abafundiswa ngumfundi othweswe iziqu eminyakeni yakho yokuqala emibili. KwaHodges, osayizi bekilasi lethu balinganiselwa ku-12-15 futhi bafundiswa ubuhlakani bokuwina imiklomelo abanolwazi lomhlaba wangempela. Ngemuva kwakho konke, ukunakwa nokusekelwa okutholayo kungaba yisinqumo esinqumayo empumelelweni yakho.
Ilungu lomhlali waseFlorida nelungu le-Active Guard elifaka isicelo kuHodges
I-Undergraduate Rate = $ 595 ngehora lesikweletu x 12 FT Amahora Esikweletu = $ 7140- isibonelelo se-EASE ebesiyi- $ 1420 ngesemester / ($ 2841 ngonyaka) = 5720.00
Ungathola nezikweletu eziyi-16 zaleyo ntengo ngohlelo lwethu lweCore + 4! $ 5720/16 Amakhredithi = $ 357.50 - $ 250 Isaphulelo Sezempi Esisebenzayo = $ 103.75 ngehora lesikweletu ngalinye.
* Amanani wokufunda angahluka ngokuya ngezimo zomuntu kanye nohlelo abalukhethile lokufunda.
Vumela Abaxhumanisi Bethu Abafanelekile Bokusiza kanye Nabaxhasi Bezezimali Bakusize Ukuxhasa Ikusasa Lakho. Faka isicelo namuhla!
I-Undergraduate Tuition yazo Zonke Izifundo Zehora Lesikweletu: $ 595 ngehora lesikweletu ngalinye
Izifundo Zokuthweswa Iziqu Kuzo Zonke Izifundo Zehora Lesikweletu: $ 830 ngehora lesikweletu ngalinye
IsiNgisi njengohlelo lolimi lwesibili: $ 295 ngehora lesikweletu ngalinye
Izifundo Ezijulile ze-English: $ 335 ngehora lesikweletu ngalinye.
Uhlelo Lokufunda olususelwa kuCohort:
I-BSN Core Program Tuition: $ 17,200.00 ngeseshini
I-BSDH Core Program Tuition: $ 17,200.00 ngeseshini
Isifundo se-EMS Core Program - Track 1: $ 10,166.67 ngeseshini ngayinye
Isifundo se-EMS Core Program - Track 2: $ 9,700.00 ngeseshini ngayinye
Isifundo se-EMS Core Program - Track 3: $ 9,183.33 ngeseshini ngayinye
Isifundo se-EMS Core Program - Track 4: $ 8,433.33 ngeseshini ngayinye
Isifundo se-MAcc Core Program: $ 9,966.67 ngeseshini ngayinye
I-PTA Core Program Tuition: $ 10,933.33 ngeseshini ngayinye
I-PN Core Program Tuition: $ 36,980.00 ngeseshini
I-CMHC Core Program Tuition (Iqoqo - Ithrekhi): $ 9,271.43 ngeseshini
I-CMHC Core Program Tuition (Non-Cohort) **: $ 830 ngehora lesikweletu ngalinye
UPOWER ™ Subscription **: $ 3,000.00 ngezinyanga eziyisithupha
I-UPOWER ™ Graduate Subscription **: $ 3,500.00 ezinyangeni eziyisithupha
Kungani Ukhetha iHodges University?
Amasayizi Amakilasi Amancane
Amandla Okuphothula Iziqu
Izinketho Ezihlukahlukene Zokulethwa Kohlelo Ezilingana Nempilo Yakho
Kufakazelwe Ikharikhulamu Esekelwe Emsebenzini Efundiswe Ngoprofesa Abaphumelele Emiklomelweni
Izinsuku Zokuqalisa Zanyanga zonke
Thatha Ikilasi Elisodwa Ngesikhathi Sezinkambo Eziningi
Qala i- # MyHodgesStory Yakho Namuhla!
Funda Ngosizo Lwezezimali Olutholakalayo, amaScholarships, Izivumelwano kanye nezinhlelo Zesaphulelo
Imali Yokufaka Iziqu: $ 50
Imali Yezinsizakalo Zabafundi: $ 250 ngeseshini
Imali Yezincwadi / Yezinsizakusebenza (uma ingafakiwe): $ 0 - $ 400 ngesifundo ngasinye, ngeseshini ngayinye
* Ukuze uthole uhlelo oluphelele lokufunda nokukhokha, kufaka phakathi izaphulelo, sicela ubone okwamanje Imigomo nemibandela yokubhalisa Ngolwazi olwengeziwe.